“Taninketsa indostrialy”: manenjika ny tena “Vita Malagasy” ny faritra Atsinanana | NewsMada
“Taninketsa indostrialy”: manenjika ny tena “Vita Malagasy” ny faritra Atsinanana
Miroso tsara ny tetikasa “Taninketsa indostrialy” any amin’ny faritra Atsinanana. Nanararaotra nijery izany tontolo izany ny minisitry ny Indostria, ny varotra sy ny fanjifana, Razaindravahy Edgard, tamin’ny nandraisany ireo simenitra avy any ivelany tao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina.
Faritra rehetra eto Madagasikara, hametrahana ny tetikasa “Taninketsaka indostrialy”, raha tsorina, indostria iray farafahakeliny isaky ny distrika iray na Odof (One district, one factory). Raha i Toamasina manokana, mipaka any amin’ny maro anisa, ao amin’ny faritra na tsia ny fisian’ny indostria mamoka-bary sy orinasa mpanodina vokatra ao an-toerana.
Ny azo ambara, ohatra, ny orinasa lehibe Natema mpamokatra lohamenaka avy amin’ny jirofo (Eugnénol), vokatra be mpitady eto an-toerana sy any ivelany. Mety fahombiazana mampiavaka ny faritra Atsinanana, satria manaja ny fepetra rehetra. Hita izany manomboka amin’ny fambolena jirofo, hatramin’ny famadiahana azy ho lohamenaka hahazoana “Eugénol” vokatra fampiasa eran-tany. “Ohatra iray azo alain-tahaka ara-indostrialy izany ao amin’ny faritra, ho fampandrosoana ny toekarena”, hoy ny minisitra.
Ohatra iray hafa noraisina ny Soanamad, ao anatin’ny tetikasa « Taninketsa indostrialy » ihany. Orinasa manodina akondro, mangahazo, vomanga. Vokatra tsy atahorana ho simba havadika ho lafarinina mety mahatratra 50 t. Vokatra tena malagasy ho fampandrosoana ny toekarena manerana ny faritra sy ao an-toerana raha manjifa ny tena “Vita Malagasy”, mety ho tonga amin’ny fahavitan-tena ara-tsakafo, mampihena ny entana hafarana.
Endriky ny indostria roa ireo azo arahina eo amin’ny lafiny indostria , saingy raha mbola homena tombony ny fanafarana entana, tsy hahazo vahana hatrany ny « Vita Malagasy ». Manainga ny herin’izy ireo ny minisitera amin’ny fampandrosoana ny faritra sy ny firenena.